काठमाडौंमा जताततै भीडै भीड, जोगिने कसरी ? Nepalpatra काठमाडौंमा जताततै भीडै भीड, जोगिने कसरी ?
७ बैशाख २०७८, मंगलबार
पत्रपत्रिकावाट कोरोना लेखहरु धर्म-संस्कृति हेल्थ टिप्स घरेलु उपचार जीवन-दर्शन ज्योतिषशास्त्र वास्तुशास्त्र विज्ञान-जिज्ञासा स्वास्थ्य जिज्ञासा
NepalpatraNepal Patraकेपी शर्मा ओलीकोभिड–१९कोरोना भाइरसनेकपाप्रचण्डप्रधानमन्त्रीमौसम पूर्वानुमान
काठमाडौंमा जताततै भीडै भीड, जोगिने कसरी ?
४ असार २०७७, बिहिबार
असार ४, काठमाडौं । राजधानीका पहिलाका व्यस्त बजार जानुहोस्– लाग्छ, अहिले देशमा कोरोना महामारी छ र ? जताततै भीडै भीड छ। चोक–चोकमा बन्द गरिएका ट्राफिक लाइट खोलिएका छन्। सवारी जाम सुरु भइसकेको छ। सडकपेटीमा पैदलयात्रुको चाप छ।
अर्कातिर देशमा कोरोना संक्रमण प्रत्येक दिनजसो बढ्दो गतिमा छ। यससँगै चुनौती थपिएको छ– अब जोगिने कसरी ? संक्रमणको जुन उचाइमा लकडाउन गरिनुपथ्र्यो, खोल्नुपर्ने बाध्यता आयो। जति बेला खोल्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो, पूर्ण लकडाउन गरियो। अर्थात्, जोखिमपूर्ण समयमा बजार खचाखच हुँदै गएका छन्। तर, सर्वसाधारणमा त्यसको कुनै परवाह नभएको आभास हुन्छ।
इन्द्रचोकका व्यापारी हरि श्रेष्ठ बुधबार ग्राहक कुरिरहेका थिए। किनमेल गर्ने कम भए पनि ओहोरदोहोर गर्ने टन्नै देखिन्थे। साँघुरो गल्लीमा आपसमा ठोक्किँदै बढिरहेका थिए। ‘हाम्रो ठाउँ नै साँघुरो छ’, उनले भने, ‘बाटो पनि सानो छ। हामीलाई दूरी कायम गर्न एकदम मुस्किल छ। पसलमा किनमेल गर्न आउनेहरू पनि सचेत भइदिए कम जोखिम हुन्थ्यो।’
असन, इन्द्रचोक, न्युरोडलगायत ठाउँमा पुरानै अवस्थाजस्तो मानिसको चाप देखिन थालेको छ। सरकारले असार १ गतेदेखि लकडाउन केही खुकुलोे बनाएसँगै उपत्यकाका प्रायः पसल खुल्न थालेका छन्। केही दिनयता असनका कपडा, भाँडाकुँडा, गहना, खुद्रालगायत सबै पसल खुलेका छन्। कामदार पनि आउन थालेका छन्। भारी बोक्ने मजदुर पनि पसलका सामान ओसार्ने कामको खोजीमा हिँडिरहेका देखिए।
सडकमा हिँड्नेको चाप पनि बढेको देखियो। किनमेलमा आउनेभन्दा हिँडडुल गर्ने धेरै भएको पसले बताउँछन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा उपेन्द्र अर्यालले लेखेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ६९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप ११ जनाको मृत्यु
कोरोना बढेसँगै लकडाउन गर्न सिफारिस
वाग्मती सरकारद्वारा १० जिल्लामा प्रहरी चौकी भवन निर्माण
वन सचिव डा. ओलीको बिदाइ
उच्च गुणस्तरीय “बेल्ट एन्ड रोड” सहयोगमा चीन प्रतिबद्धः सी चिनफिङ
पछिल्लो २४ घण्टामा १७३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २५१ जना…
नेपालीको लागि दु:खद समाचार : त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित
पार्टीमा गम्भीर संकट पैदा भएको भन्दै गोकर्ण विष्टले लेखे कडा…
काठमाडौं होली खेल्दा एसिड छ्यापियो, ३ जना बालबालिका घाइते
संसदमा कविता वाचन गरेर खगराजले हाने गगन र सभामुखलाई तीखो बाण
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, 'सबै मिलेर आए हुन्छ, एमाले एक्लै चुनाव लड्छ'
कृष्णबहादुर महरालाई सिध्याउने रोशनी शाहीको अर्को काण्ड बाहिरियो
यस्तो छ प्रचण्डले बादललाई सांसद पदवाट आज नहटाउनुमा लुकेको रहस्य
सांसद र मन्त्री पद च्वाट भएपछि प्रचण्डलाई टोपबहादुर रायमाझीले दिए कडा प्रतिक्रिया
आगलागी र सवारी दुर्घटनामा परी देशभर आज ७ जनाको मृत्यु
© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित